Ciidamada Maamulka 'Somaliland' Oo 65KM Ujirsaday Magaalada Garoowe Kadib Dagaalkii Tukaraq.
Monday January 08, 2018 - 16:51:56 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo dib uga qarxay deegaanno katirsan gobolka Sool ee dalka Soomaaliya oo sanadadii lasoo dhaafay ay ka jireen xiisada colaadeed.
Wararka ka imaanaya Sool ayaa sheegaya in maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Somaliland ay la wareegeen deegaanno istiratiiji ah oo kulaalaya magaalada Garoowe.
Dagaallo culus oo dhaxmaray Maleeshiyaadka Puntland iyo kuwa Somaliland ayaa sababay dhimashada tobaneeyo qof oo dhinacyadii dagaallamay ah.
Mas’uuliyiin iyo dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada maamulka ‘Somaliland’ ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Tukaraq oo sanadadii lasoo dhaafay ay maamulayeen ciidamada ‘Puntland’, deegaankan istiraatiijiga ah oo ay marto waddo laami ah waxaa maalmo ka hor booqday wasiirka qorsheynata Dowladda Federaalka.
Sidloo kale ilo wareedyo laga helay Jiidda dagaalka ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Hargeysa ay gacanta ku dhigeen tuulooyinka Farayaale iyo Godqaboobe oo qiyaastii 65KM ujira magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ahna fadhiga rasmiga ah ee maamulka Puntland.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamo gurmad ah oo Garoowe ka baxay ay kusii jeedaan jiidda dagaalka, wasiirka warfaafinta maamulka ‘Somaliland’ oo shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu qabsadeen Tukaraq ayna uga jawaabayaan daandaan uga yimid wax ugu yeeray Dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale Warsaxaafadeed kasoo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in weerar gardarra ah uu uga yimid dhanka Somaliland waxayna sheegeen in ujeedka weerarkan laga leeyahay uu yahay carqaladeynta socdaalka Farmaajo uu ku joogo magaalada Garoowe.
Waa Markii ugu horraysay oo ciidamada maamulka isku magacaabay Somaliland ay masaafo ka yar 70KM ujirsadaan Garoowe horay ayuu maamulkan Puntland ugala wareegay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool